PUBG waxay ku laaban doontaa Hindiya mahadnaqa Microsoft | Androidsis
Tan iyo markii lagu soo saaray qalabka mobilada, PUBG Mobile wuxuu noqday mid ka mid ah cayaaraha ugu faa iidada badan nidaamka deegaanka ee mobilada, oo ka sarreeya Fortnite Blue Hole (Kuuriyaan) waxay ku kalsoon tahay Tencent (Shiinaha) inay bilaabaan nooca PUBG ee moobiilka sida Call of Duty: Mobile.
Markii dagaalkii ganacsi ee u dhexeeyey Hindiya iyo Shiinaha uu hirgalo, qaar badan ayaa ahaa Barnaamijyada Aasiya ee laga saaray Play Store ka yimid Hindiya, mowjaddii ugu horreysay ee TikTok kamid ah. Mawjadda labaad, waxay ahayd PUBG oo aragtay sida codsigeeda loogala noqday Hindiya, oo ah mid kamid ah dalalka ugu badan ee isticmaala.
Tencent, waa shirkad soo saartay oo dayactirtay ciyaarta sanadihii la soo dhaafay, martigaliyaa dhammaan xogta ciyaarta ee ku saabsan server-keeda oo lagu martigeliyey Shiinaha. Tan iyo markii lagu dhawaaqay ka saarista PUBG ee Hindiya, Krafton, oo ah shirkadda waalidka ee PUBG Corporation, waxay raadisay qaabab ay ugu suuragasho inay dalkan dib ugu noqdaan.
Xalka waxaa laga helay Microsoft iyo barnaamijkeeda keydinta daruuriga ee loo yaqaan Azure. Waad ku mahadsan tahay heshiiska labada shirkadood ay gaareen, waxay noqon doontaa daruurta Microsoft taas keydi dhammaan xogta ciyaarta, laakiin maahan oo keliya noocyada moobiilka, laakiin sidoo kale xogta nooca PC-ga iyo nooca kombiyuutarka.
Beddelaadda adeegaha waxay yareyn doontaa ping
Dhaqdhaqaaqani ma hagaajin doono oo keliya asturnaanta iyo amniga dhammaan macluumaadka isticmaalaha, laakiin sidoo kale, waxay yareyn doontaa xiisaha ciyaarta, mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee cinwaankan dhammaan dhufto ee laga heli karo.
Microsoft waxay Hindiya ku leedahay saddex xarumood oo xog ah, sidaa darteed waxay u badan tahay in ka hor dhammaadka sanadka, dadka isticmaala dalkan ay mar kale ku raaxeysan doonaan PUBG amniga iyo asturnaanta ay bixiso Azure, oo ah barxad aysan dowladda Shiinaha marin u helin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » PUBG waxay ku laaban doontaa Hindiya mahadnaqa Microsoft
Sida loo soo celiyo astaamihii caanka ahaa ee Google ee ku xirnaa Android iyo iOS